Isihlungi esiyindilinga, esaziwa nangokuthi i-elementi yokuhlunga, singomunye wemikhiqizo yokuhlunga esetshenziswa kakhulu. Yenziwe ngensimbi engagqwali noma usilika omnyama. Ngemva kwalokho, ingacutshungulwa ibe isihlungi esigoqiwe sonqenqema nesihlungi sezendlalelo eziningi.
Hlunga ulwazi lomkhiqizo
Indwangu: I-wire mesh, insimbi engagqwali, indwangu kasilika emnyama, i-galvanized mesh, njll.
Ubuchwepheshe bokucubungula: isitembu esikhulu somshini wokugxiviza.
Izici: isihlungi esiyindilinga sinezinzuzo zendawo enkulu ephumelelayo, ukusetshenziswa okulula kanye nezindleko eziphansi.
Ukuhlukaniswa: kungaba ungqimba olulodwa noma ungqimba oluningi, noma kwenziwe ngensimbi engagqwali noma usilika omnyama.
Isicelo: ikakhulukazi esetshenziselwa ukuhlunga embonini yenjoloba nepulasitiki kanye nokuhlolwa kokusanhlamvu, uwoyela kanye nemboni yezemithi.
Ubukhulu bobubanzi bangaphandle: 6000mm (6m)
Ubukhulu bentambo yobubanzi bokucubungula i-wire mesh: 4mm
ucingo ububanzi (mm)
1x30m reel isisindo net (kg)
304, 316, 316L insimbi engagqwali enezikhala elukiwe, insimbi engagqwali anezikhala sintered, sintered ukuzwa; ukwakheka kwesihlungi esigoqiwe siwungqimba olulodwa noma ungqimba oluningi, futhi izinto ezibophezelayo ipuleti le-aluminium, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti lethusi, ipuleti likathayela, njll.
1) Akukho lutho oluwayo;
2) Ingasebenza ngokuphepha ku-270-400 ° C isikhathi eside. Kungakhathaliseki izinga lokushisa eliphezulu noma izinga lokushisa eliphansi, izinto zensimbi engagqwali ngeke zehlise izinto eziyingozi, ukusebenza kwempahla kuzinzile, umthamo wokungcola uphezulu, nokunemba kokuhlunga kunembile;
I-3) Akulula ukonakala, nokulahlekelwa kwengcindezi encane kanye nendawo enkulu yokuhlunga;
4) Kulula ukuhlanza nokuphila isikhathi eside.
Isihlungi esinamalebe, i-sintered filter element, idiski yesihlungi nezinto ezihlukahlukene zokuhlunga kanye ne-wire mesh. Izinto ezibonakalayo zihlanganisa insimbi engagqwali, i-duplex SS, i-Supper Duplex SS, i-monel, i-inconel, i-nickel, i-hastelloy njll.
I-Petro-chemical, i-Polymer, i-Catalytic filtration, i-fuel filtration, ulayini wokukhiqiza ingcindezi kawoyela kanye nokusika ukuhlungwa kukawoyela kanye ne-homogenization; Ukwelashwa kwegesi; ukuhlanzwa kwamanzi; izimboni zemithi, izimboni zokudla; ​​ukuvikela ilangabi lezimboni, njll.
1. Ukwamukeleka kokukhiqiza kwe-OEM: Umkhiqizo, Iphakheji...
2. I-oda lesampula
3. Sizokuphendula ngombuzo wakho emahoreni angama-24.
4. ngemva kokuthumela, sizokulandelela imikhiqizo kanye njalo ezinsukwini ezimbili, uze uthole imikhiqizo. Uma uthola izimpahla, zihlole, futhi unginikeze impendulo. Uma unemibuzo mayelana nenkinga, xhumana nathi, sizokunikeza indlela yokuxazulula.
5.Ukwesekwa kokuhlolwa kwesampula.
6.Ukushintshela okusha uma ukunganeliseki.
Okwedlule: Izihlungi Zeshubhu Yesikrini Enezimbobo & Obhasikidi Bensimbi Engagqwali Ipayipi Elibhoboziwe
Olandelayo: I-Stainless Steel 316 yekhwalithi ephezulu ye-barbecue wire mesh grill
304/316 I-Sintered Metal Filter Disc , I-Rimmed Fi...
I-Stainless steel filter mesh metal rimmed ring disc (isihlungi sediski, amaphakethe okuhlunga, idiski yesihlungi se-wire mesh). Uhlobo Lwempahla: Insimbi engagqwali enezikhala, inezikhala zethusi, ezinezikhala zethusi, indwangu yocingo emnyama, inetha lenickel, i-monel mesh, i-hastelloy mesh, i-inconel mesh njll. Ama-SUS304 Stainless Steel Mesh Disc anamarimu asetshenziswa kakhulu njengesikrini sokucwenga embonini ye-petroleum. Refining Screen Grade Stainless Steel Rimmed Mesh Discs amaphekhi ayisicaba acutshungulwe kusuka ku-304, 304L noma 316 ss mesh cloth ene-e...
Ubhasikidi/i-disinfectio yensimbi yensimbi engagqwali...
Ukwethulwa komkhiqizo we-stainless steel disinfection basket 1. Insimbi engagqwali yokubulala amagciwane: 302, 304, 304L, 316, 316L nezinye izinto zensimbi engagqwali. insimbi engagqwali elukiwe elinezikhala, insimbi engagqwali punching anezikhala, argon arc welding, resistance welding, njll. 3. Surface treatment me...
Insimbi engagqwali Johnson insimbi engagqwali v-wire ...
Izinzuzo zikaJohnson insimbi engagqwali i-v-wire well screen tube umkhiqizi 1. Ipayipi lesikrini elinendawo enkulu yokuvula lifaneleka kakhulu ukwakhiwa kwemithombo yamanzi esezingeni eliphezulu, imithombo kawoyela nemithombo yegesi. 2. Isikrini esinezindleko eziphansi zokusebenza nendawo enkulu yezimayini sivumela ukungena kwamanzi angaphansi komhlaba. Imithombo yamanzi eningi ingehlisa izinga lamanzi futhi yonge ukusetshenziswa kwamandla. 3. Ngaphansi kwezimo ezifanayo, indawo evulekile ephezulu ingenza isivinini se-groundwa...
Insimbi engagqwali izinga lokushisa eliphezulu sintered fiber...
Izici eziyinhloko ziyi-porosity ephezulu kanye ne-permeability enhle kakhulu, ukulahlekelwa kwengcindezi encane nokugeleza okukhulu; Umthamo omkhulu wokuthuthwa kwendle, ukunemba okuphezulu kokuhlunga kanye nokucindezela okuphezulu ekusetshenzisweni komjikelezo omude wokushintsha; Inokumelana nokushisa okuhle kakhulu nokumelana nokugqwala, ingasetshenziswa isikhathi eside ku-600 ℃, futhi ingamelana nokugqwala kwe-nitric acid, i-alkali, izinyibilikisi eziphilayo nezidakamizwa; I-Wave ingaphulwa ukwandisa indawo yokuhlunga, futhi ukushisela kungenza uketshezi luqine...
Insimbi engagqwali 304/316 multilayer sintered wahlangana...